Praia, ebe njedebe na Cape Verde | Akụkọ Njem
Praia, ebe njedebe na Cape Verde
Mariela Carril | | Cabo Verde, Ihe ị ga-ahụ
Ọ ga-amasị gị ịga ezumike gaa njem n'Africa? Afrika O nwere ebe di egwu, ma na kọntinenti ma na agwaetiti nile di na mmiri ya na oke osimiri ya. Otu n'ime ebe ndị a bụ Cabo Verde, otu agwaetiti dị na mmiri Atlantic.
Agwaetiti ndị a sitere na ugwu mgbawa na isi obodo ya bụ Praia, ebe a na - akpọ anyị taa ka anyị chọpụta ma nwee ekele.
2 Gaa na Praia na gburugburu ya
Dị ka anyị kwuru na ọ bụ agwaetiti, otu mba nke dị na Senegal. Ọ bụ Obodo Portuguese na taa nke ya ukara asụsụ bụ Portuguese. Ọtụtụ narị afọ gara aga, agwaetiti ndị ahụ bụ ihe dị mkpa na ahịa ohu mba ụwa, ọ bụ ezie na tupu ndị Portuguese achọpụta ha, ha enweghị agwaetiti, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke ojii, site n'oké ọhịa na ugwu mgbawa.
La ahia ohu Ọ gbasaa site na 40th na XNUMXth narị afọ, mgbe a kwụsịrị ịgba ohu na ọrụ ebe a ghọrọ nke a na-etinye n'ubi owu. Mana ọtụtụ ndị bi na obodo ahụ kwagara mba ọzọ mgbe ọrụ a banyekwara na nsogbu, oge na-adịghị anya. Ndị Cape Verde ọbụna cheta na n'ime narị afọ nke iri abụọ, na XNUMXs, enwere oke ụnwụ nri nke gọọmentị Portuguese na-ekwughị obere okwu.
Ọgụ maka nnwere onwe na-amalite site na usoro nke ime obodo nke Africa mgbe Agha Worldwa nke Abụọ biri, ma nnwere onwe enwere naanị na 1975. Afọ ndị tara akpụ ga-abịa, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba, na ụdị ụnwụ laghachiri na mbibi ọtụtụ oge.
Isuo nke Cape Verde tinye na ngụkọta nke agwaetiti iri buru ibu na ndi pere mpe ise. Ha so na macronesia, si ugwu mgbawa na agwaetiti Fogo, n'ezie, a ka nwere ugwu na-agba agba na-arụ ọrụ nke mgbawa ikpeazụ ya malitere na 2014. Kedu ka ihu igwe ya dị? Iche dị ka ọ bụ udu mmiri na-ekpo ala, mgbe ụfọdụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, nke mmiri ozuzo na ifufe na-eme ka ọ na-aga mgbe niile nnukwu idei mmiri na mmiri ozuzo.
Gaa na Praia na gburugburu ya
Praia bụ n'otu oge a obodo na obodo. Ọ dị n’agwaetiti Santiago ma bu isi obodo nke mba. Santiago bụ agwaetiti kacha ibu na akụkụ nke otu Sotavento. Ọ dị kilomita iri asaa na ise n’ogologo na ihe dị ka iri atọ na ise. Ndi mmadu bi na 75 na Praia, otu n’ime obodo ya, bụ obodo kachasị biri.
Ndị Portuguese bịarutere Santiago na 1460 wee hiwe obodo mana n'ihi mwakpo mgbe niile site na corsairs na ndị na-apụnara mmadụ, gụnyere ndị a ma ama Francis Drake, ndị mmadụ kwagara Praia na njedebe nke narị afọ 1975. Kemgbe nnwere onwe na XNUMX obodo ahụ etolitela ọtụtụ mkpa na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya.
Ọ bụ ezie na ndụmọdụ m bụ ịgagharị n'ọtụtụ agwaetiti iji chọpụta ịma mma nke Cape Verde, ị ga-anọ ụbọchị ole na ole na Praia. Nke a bụ agbata obi Platô, nke e wuru na promontory nke na-ahụ oke osimiri, nke bụ ebe bụ ụlọ ndị kachasị mkpa, ụlọ ndị isi oche gụnyere, ụlọ obibi nke narị afọ nke XNUMX, Townlọ Nzukọ Ochie, Churchka nke Lady anyị nke Grace na Ncheta nke Diogo Gomes, onye ọkwọ ụgbọ mmiri chọtara agwaetiti ahụ, tinyere ụfọdụ ụlọ ngosi ihe nka.
Citadela bụ obodo mara mma na okomoko, ebe ndị ọgaranya bi. Diskos na ụlọ oriri na nkwari abalị dị na Achada Grande Frente na ndị nnọchi anya obodo na Achada de Santo Antonio. Osimiri Praia dị na mpaghara Gamboa ma onwere onye ozo no na agbata Quebra Cinnamon, na ebe a na-ere ahịa na ebe a na-ere nri.
Ikwu okwu banyere mbara ala, Praia bụ mpaghara dị larịị nwere ọtụtụ ndagwurugwu. E wuru agbata obi na mbara ala ndị a. N'ebe ọwụwa anyanwụ bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, e mere baptizim Nelson Mandela, ọnụ ụzọ dị nchebe Cape Verde.
Enwere ike iburu tagzi na etiti ma ọ bụ bọs. E nwere nke jikọtara Plateau na ọdụ ụgbọ elu, site na onye ahịa enyere Solatlántico. Busgbọ ala ọzọ na-akpọrọ gị Tarrafal, n'ebe ugwu nke agwaetiti ahụa, ihe dị ka kilomita 70, ya ndị njegharị na ndị njem ha.
Maka akụkọ ihe mere eme ị nwere ike ịga na Ka ọ dị mma, nso ebe a, ogige ịta ahụhụ nke ahụ na-echeta oge gara aga nke mba ahụ na ọ rụkwara ọrụ n'etiti '30 na 1961. Ebe a Ebe Ndebe Ihe Nguzogide.
Maka akuku nwere amara karịa ị nwere ike ịga naanị kilomita 15 wee rute Cidade Veiha, onye bụbu isi obodo nke mba ahụ, nke agha aghaghi aghapu site na agha na mgbe nile. Kemgbe 2009 ọ bụ akụkụ nke Ebube asaa nke mmalite Portuguese na ụwa, ndepụta ndị Portuguese si n'akụkụ ụwa niile tozuru oke, ebe ọ bụ na otu afọ ọ bụ Ihe Nketa Uwa site n'aka UNESCO.
O doro anya na obodo a nwere nnukwu ihe owuwu ihe owuwu, karịsịa na chọọchị ebe ọ bụ na Iso Christianityzọ Kraịst nwere mmetụta dị ukwuu n'àgwàetiti ahụ. Ebe i nwere ike ịga na Chọọchị chọọchị kacha ochie n'ụwa, theka nke Our Lady nke Rosary, nke Manueline. Okporo ámá dị n'ihu ụka ahụ bụkwa okporo ụzọ mbụ ndị Portuguese sụrụ na mpaghara a nke ebe okpomọkụ.
Enwekwara mkpọmkpọ ebe nke Katidral Sé, nke sitere na 1555 ma bibie ya na mbuso agha na 1712, ma ọ bụ Royal Fort nke San Felipe wuru banyere 120 mita elu wuru na 1590 na kwa Ebe obibi nke San Francisco site na etiti narị afọ nke XNUMX, ndị omempụ bibiri na mmalite narị afọ nke XNUMX.
A na-akpọbu Old City Ribeira Grande ọ bụkwa ebe a na-azụ ahịa ohu site na Sierra Leone na Guinea Bissau. Columbus gafere ebe a na 1498 na Vasco da Gama otu afọ gara aga, yabụ ị nwere ike iche n'echiche akụkọ ndị a kpara ebe a.
Eziokwu bụ na Cabo Verde Ọ dị ka nke ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, lush, na-ekpo ọkụ. Ọtụtụ ndị Portuguese na-achọkarị ezumike ebe a na ụgbọ elu si n'isi obodo Europe niile. Obodo dị nchebe ileta Mana dika ebe obula enwere osimiri, mmadu aghaghi ilezi anya nke oma ihe o gha ewere rue aja ma puru ebe ahu mgbe anwu mmiri ma obu igwu mmiri. I ghaghi ima ihe banyere onodu ubochi banyere mmiri.
Ndị njem nleta kwesịrị ị attentiona ntị na-a toụ mmiri dị ọcha mgbe niile na na-eji ọgwụ ahụhụ eme ihe site la na ịba ebe ọ bụ na agwaetiti Santiago akara dị ka ebe nwere ọrịa a. N'ikpeazụ, gịnị ga-abụ a ezigbo njem nke Cape Verde? Ọfọn, banye agwaetiti ahụ San Vicente, nọrọ na Praia, gaa na nso Obodo Ochie dị nso wee, ee, wụfee n'otu agwaetiti ndị ọzọ. M na nke a ga-akwado Ọkụ, ebe ugwu na-arụsi ọrụ ike nke nwere mita 2900 nke elu na obodo San Felipe na oke osimiri mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Cabo Verde » Praia, ebe njedebe na Cape Verde
Ihe ị ga-ahụ na Mont Saint Michel
Ihe ị ga-ahụ na Shanghai